जुम्लाकाे स्याउ: खाने की सेल्फी खिच्ने? | नेपाली पब्लिक जुम्लाकाे स्याउ: खाने की सेल्फी खिच्ने? | नेपाली पब्लिक
जुम्लाकाे स्याउ: खाने की सेल्फी खिच्ने?
नेपाली पब्लिक २०७६, २६ भाद्र बिहीबार १८:२८
सुर्खेत – स्याउ भन्नेबित्तिकै जुम्ला नसम्झने शायद थोरैमात्र होलान्। यतिबेला जुम्ला पुग्नेहरु रातो लटरम्म स्याउको बिरुवा देखेर निकै मोहित छन्। धेरैको सेल्फीको प्रमुख आधार स्याउ बनेको छ। स्याउको रुखमा पुगेर होस् या सिङ्गो बगैंँचामा, पाहुनाहरु स्याउ खानेभन्दा बढी तस्वीर खिंच्ने मोह राख्छन्।
यस याममा नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीदेखि विभिन्न निकायका प्रमुखसहित मुलुकका अन्य जिल्लाका नागरिकको जुम्ला पुग्ने लर्को छ। जुम्लामा यही भदौ १९–२९ गतेसम्मका लागि सञ्चालित ‘प्रादेशिक कृषि, पर्यटन, सांस्कृतिक तथा औद्योगिक व्यापार महोत्सव २०७६’ पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई त्यहाँ पुग्ने मुख्य अवसर भएको छ।
मूलतः पातारासी, छुमचौर तथा राराताल भ्रमणका क्रममा जुम्ला पुग्नुभएकी तेह्रथुम जिल्ला निवासी पार्वता गौतमले जुम्ला हिमाली जिल्लाको सुगम उपत्यका भएको प्रतिक्रिया दिए। सुनेको भन्दा स्वयम् पुगेर देखेको जुम्ला आकाश र धर्ती जस्तो फरक भेटेँ, उनले भने यहाँ उत्पादन हुने सबै चीज प्राङ्गारिक रहेछन्।
हरेकले एक पटक जुम्ला पुग्नैपर्ने ठाउँ रहेछ। यहाँ पुगेपछि मैले ध्यानपूर्वक सोचेँ कि कर्णालीको नाम सुनेर आतङ्कित भइहाल्नेहरु जुम्ला पुग्दा सुन्नुभन्दा भोग्नु धेरै ठूलो कुरा हो भन्ने बुझ्छन् होला। यहाँ पुग्नुपूर्व मैले पनि त्यही सोचेकी थिएँ।
जुम्ला पुग्दा यहाँको बसाइँ, खानपान प्राङ्गारिक र मौलिक आतिथ्यता पाउँदा नेपाल थाहा पाउन कर्णाली आउनै पर्दोरहेछ भन्ने महसुस भएको गौतमले बताए। नेपालको पहिलो प्राङ्गारिक जिल्ला घोषित जुम्ला पछिल्ला वर्षमा साँच्चिकै स्याउ क्षेत्रमा रुपमा विकास हुँदै गएको छ। जुम्ला पुग्ने कोही जुम्ली स्याउ किन्न मात्र पाउँदा पनि हर्षले गद्गद हुने गर्छन्।
नेपालका अन्य बजारमा तेब्बर मूल्यमा खरीदबिक्री हुने जुम्ला स्याउ जुम्लामा पुग्नेहरु रु ५० मै प्राप्त गर्छन्। अहिले स्याउ किसानलाई स्याउ सङ्कलन गर्न भ्याई नभ्याई छ भने व्यापारीलाई स्याउ निर्यातको चटारो बढ्दै गएको छ। स्याउ व्यापारी छाडेर दक्षिण झर्ने जोसुकै २० केजीमाथि तीन/चार केजी परिमाणमा स्याउ लिएर मात्र तलतिर झर्ने गर्दै आएका छन्।
ओखरप्रति पनि हरेकको आकर्षण बढेको छ। प्रोटिनको मात्रा अत्यधिक पाईने जुम्लाको ओखरको चर्चा सबैले गर्न थालेका छन्। मष्तिष्क वृद्धिमा सघाउने ओखरको महत्व बुझ्नेहरुले जुम्लामा प्रतिदाना रु पाँचदेखि सात हालेर खरीद गर्ने गरेका छन्। हरेक दिन एक दाना ओखर खाने ध्येयले एक हजार दानाको रु पाँच हजारमा खरी गरी साथमा लिएर तल झरेको बाँके जिल्ला निवासी पैगुम्बर मल्लिकले जानकारी दिए।
जुम्ला पुगेर फर्कने सबैले स्याउ र ओखरलाई प्राथमिकतामा राखेर लिने गरेको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बालकराम देवकोटाले राससलाई जानकारी दिए। दैनिक तल झर्ने सयाैँ नागरिकहरुले आफूलाई खाने वा कोसेलीका रुपमा अरुलाई दिन स्याउ र ओखर साथमा लिएर झर्ने गरेका छन, देवकोटाले भने यसको वास्तविक अभिलेख असोजसम्म तयार गर्छाैँ।
उनले भने तीन हजार ४५० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको स्याउ एक हजार हेक्टरमा मात्र फल्दा छ हजार १०० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको छ। हाल दुई हजार मेट्रिक टन स्याउ निर्यात भएर रु १० करोड बराबरको आम्दानी जुम्ली स्याउ किसानले लिएका छन्।
उनका अनुसार ओखर १५० हेक्टरमा लगाउँदा १५ मेट्रिक फलेको छ। त्यसबाट पनि यहाँका किसानले आर्थिक लाभ लिने भएका छन्। जुम्लामा हाल रेड, रोयल र गोल्डेन डेलिसियस जातका स्याउ उत्पादन हुँदै आएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। चालु आवमा जुम्लाले अनुमानित रु ३० करोड ५० लाख बराबरको स्याउ उत्पादन गरेको छ।
स्याउसँगै ओखरको महत्व बढ्न थालेपछि स्याउ किसानलाई यस वर्षदेखि ओखरको खेतीतर्फ समेत उत्साहित गराएको छ। यसले आगामी वर्षमा ओखर खेती बढ्ने देखिएको छ। जुम्लामा उत्पादित रैथाने प्राङ्गारिक बाली तथा फलफूलले उचित बजार पाएमा यसले कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणको सोच, नीति र आत्मनिर्भरताको लक्ष्य सफल हुने प्रदेश सरकारका पदाधिकारी बताउँछन्। (रासस)
स्याउ र ओखर’